यदि मेरो बिहे भएको भए यो लकडाउनमा मेरो जुम्ल्याहा सन्तान हुने रहेछन् । खासमा म ‘ट्विन्स लभर’ हो । मेरो विभिन्न चाहनाभित्रको यो पराकाष्ठामा नै पर्छ ।
एजेन्सीजेष्ठ ७, २०७७
अलि ग्रिपर लिखित ‘सन्दुक रुइत’ मलाई राम्रो लाग्यो । मैले खगन्द्र संग्रौलाको बिछट्टै राम्रो नेपाली अनुवादमा त्यो किताब पढेको हुँ । एक साधारण मानिसको असाधारण जीवन कथा हो, यो । देशको अति विकट सोलुको शेर्पा परिवारमा जन्मिएका रुइतको संघर्ष अत्यास लाग्दो छ ।
‘लकडाउन’ले सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठलाई त घरभित्रै थुनेको त होला तर उनीहरूको प्रेम नि ? अहँ, उनीहरूको प्रेम त झन् फक्रिदै गइरहेको छ । सृष्टिले इन्स्टाग्राममा रोमान्टिक मुडमा पोस्ट गरिरहेका तस्बिर यति बुझ्न काफी छ ।
कुकुरको सत्य कथामा बनेको जापानी फिल्म ‘हाचिको’ सबैभन्दा बढी मनपर्‍यो । फिल्म हेरेपछि कुकुर र मान्छेबीचको सम्बन्धले निकै भावुक बनायो । सडकमा पशुपन्छी भोकै भइरहेको यो समयमा यो फिल्म हेर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
लकडाउनमा तपाईं के गरिरहनुुभएको छ ?
परिवार कति महत्वपूर्ण हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले यही लकडाउनको बेला अनुभव गर्ने मौका पाइरहेकी छु । लकडाउनले परिवारसँग यति नजिक बनाइदिएकोमा यो लकडाउनलाई धन्यवाद नै पो भन्नुपर्छ जस्तो छ ।
लकडाउनमा तपाईं के गरिरहनुुभएको छ ?
लकडाउनको नियमलाई पूर्ण पालना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भुलिरहेको छु । यही लकडाउनमा ट्विटर अकाउन्ट खोलेको छु, एक्टिभ त हुनै पर्‍यो ।
रामजी ज्ञवालीचैत्र २३, २०७६
राजेश हमालको ‘लक डाउन’ योजना (भिडियो सहित)
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि गरेको ‘लक डाउन’को पहिलो दिन बिहानै अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘डे वान’ लेख्दै एउटा भिडियो सेयर गरे ।
अनिल यादवचैत्र ११, २०७६
कोरोना भाइरसबाट बच्न के उपाय अपनाउनु भएको छ ?
हात सफा गर्नलाई ह्याण्ड सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गरिरहेको छु । सकेसम्म घरकै खाना खाइरहेको छु । कार्यक्रमहरूमा निकै कम सहभागिता जनाइरहेको छु ।
जीवनमा हरेक चिजको अनुभव लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । गाँजा खाएको अनुभव पनि राम्रै छ । जब गाँजा तानें, त्यसको एकै छिनपछि त संसार नै अर्को लागेर आयो । अरू साथीहरू बोल्छन्, आफूलाई बोल्नै मन नलाग्ने । सुन्यो, टाउको हल्लायो । सायद मलाई गाँजा धेरै लागेर होला । यो माया, मोह, धन, सम्पत्ति भन्ने केही होइन रहेछ भन्ने लागेर आउँदो रहेछ ।
प्रेम अभिव्यक्त गर्नका लागि स्पेसल दिन नै कुर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । माया हरपल, हर प्रहर, हर परिस्थितिमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । माया र विश्वासमै यो संसार चलेको छ । मचाहिँ मम्मी, आफ्ना, आफन्तसँंग सधैं मायामा रमाइरहेको हुन्छु । त्यसैले भ्यालेन्टाइन डेको कुनै विशेष योजना छैन ।
चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेशसँगै प्रियंका कार्की नेपाली चलचित्र उद्योगमा निकै व्यस्त भइन् । प्रियंकाको आगमनपछि चलचित्र उद्योगका धेरै अभिनेत्रीलाई टाउको दुखाई समेत बनेको थियो ।
‘शुभ लभ’बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेका ज्योतिष हरिहर अधिकारी पछिल्लो समय खासै मिडियामा देखिएका छैनन् । कहिलेकाहीं फ्याट्टफुट्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएपनि उनी सुटक्क पस्ने र सुटुक्क निस्कने गरेको देखिएको छ ।
सुन्दा पनि लाज लाग्ने कुरा हो यो । सीमा नाकामा पुस्तक रोकिएको घटनाबाट हामी राज्यसत्ताले देशको शिक्षालाई कसरी लिएको छ भन्ने प्रस्ट बुझ्न सक्छौं । करको दर र दायरा खुकुलो बनाएर पुस्तकको सहज आयात हुनुपर्छ । सीमामा रोकिनुपर्ने त मदिरा हो । ड्रग्स हो । अवैध मालसामान हो ।
सोमपालले राखेको प्रेम प्रस्तावलाई प्रतिभाले स्विकार गरेकी थिईन् । प्रतिभाले प्रेम प्रस्तावलाई स्विकार गर्नुलाई सोमपालले आफ्नो जीवनकै सर्वाधिक ठुलो सफलता मानेका थिए । लजालु स्वभावका सोमपालले विवाह समारोहमा भने दिल खोलेर नाचे ।